४ दिनपछि नेप्सेमा सामान्य वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण ४ दिनपछि नेप्सेमा सामान्य वृद्धि
on: ५ मंसिर २०७५, बुधबार १६:२० नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
४ दिनपछि नेप्सेमा सामान्य वृद्धि
५ / ५ समूहमा वृद्धि र कमी आउँदा परिसूचक स्थिर
मङसिर ५, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको केहि समय बढेको परिसूचक एक घण्टामा यस दिनको सबैभन्दा न्यून १ हजार १ सय ७६ दशमलव ७३ विन्दुमा पुगेको थियो । सो विन्दुमा पुगेपछि उकालोतर्फ लागेको शेयर बजार अन्त्यमा स्थिर भएर बन्द भएको हो । गत दिनको तुलनामा १ अङ्कले बढेर नेप्से १ हजार १ सय ८२ दशमलव ७४ विन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ५३ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबार रकम रू. ९ करोड ३९ लाख बढेको हो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव १४ प्रतिशत बढेर २ सय ५१ दशमलव ४६ विन्दुमा पुगेको छ । बजार पूँजीकरण गणना नेप्सेको वेबसाईटले देखाएको छैन ।
१० समूहको परिसूचकमा पाँच समूहको परिसूचक बढेको छ भने पाँच समूहको परिसूचक घटेको छ । जसले गर्दा परिसूचक स्थिर भएको छ । बैङ्किङ, विकास, वित्त, ‘अन्य’ र जीवन बीमा समूहको परिसूचक बढेको छ । जीवन बीमा समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको छ ।
१० समूहको परिसूचक
१५१ कम्पनीको कारोबार
यस दिन कारोबार भएका कम्पनीमध्ये ७० कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ६१ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २० कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । साङ्ग्रिला डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेडको शेयर मूल्य ४ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ४६ मा कारोबार भएको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य ७ दशमलव ४० प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू. ७ सय ८८ मा कारोबार भएको छ ।
यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अर्थात् ३३ दशमलव ७१ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । नेप्सेको एडी रेशियो १ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । यसले बजार वुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १७:३४
७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १४:०९
दोस्रो घण्टामा १०.०१ अंकले बढ्यो नेप्से, अपर तामाकोशीको सर्वाधिक कारोबार (१ बजेको अपडेट)
७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १३:०९
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १७:१२